Saxan bir aan xadi lahayn, Xidho saxanka birta u adkeysanaya, Weelasha Ubaxa Weyn - Hongyi
Shandong Hongyi New Waxyaabaha Co., Ltd. waa wax soo saar biibiile bir ah, iibka, saadka, ganacsiga caalamiga ah oo ka mid ah shirkadaha isku dhafan. Shirkaddu waxay habeyn kartaa qalab kala duwan iyo qeexitaanno ah biibiile bir ah oo aan xaddidneyn iyo ganacsi qoto dheer oo wax soo saar ah Saamiga taagan waa ku filan yahay, shirkadu waxay leedahay in kabadan 20 shandong horumarsan oo heer sare ah oo soosaara tuuboyinka birta ah, habka wax soo saarku waa mid horumarsan, awooda farsamada waa mid xoogan, macnaheeda waa la dhameystiray, tayada waxsoosaarka ayaa wanaagsan, wuxuu ku raaxeysanayaa sumcad wanaagsan iyo caan ka ah warshadaha.
Xidhmada tube tubka qaab afar geesle ...
Shandong Hongyi Waxyaabaha Co., Ltd.
Wax soo saarkayagu waxay u hoggaansamaan nidaamka ISO9001 iyo API, Taageer kormeerka dhinac saddexaad.
Iibkeenu wuxuu kuu soo diri karaa oraahdii ugu dambeysay hal mar haddii aad u baahato oo wuxuu kaa siin karaa qiimo dhimis dheeraad ah sida ay u badan tahay.
Adeeg 24 saacadood ah iyo taageero farsamo oo xirfad leh.
Waxyaabaha ay soo saarto shirkadda waa: badeecadaha: birta kulul ee birta ah ee birta kuleylka ah ee birta ah, tubbada birta ah ee birta ah (tuubbada kuleeliyaha), tuubada saxda ah, tuubbada / afar geeslaha, saxanka birta ah ee iska caabbinta, saxanka birta ah, saxanka birta ee daawaha ah, dheriga ubaxa corten iyo birta corten shaashadda ...
232020 / Nofeembar
172020 / Nofeembar
Tuubo laba jibbaaran oo aan xuduud lahayn waa nooc bir ah oo dhaadheer oo leh meel godan oo aan lahayn kalagoys ku wareegsan. Tuubo bir ah oo qaybta godadka leh ayaa si weyn loogu isticmaalaa gudbinta dareeraha, sida gudbinta saliidda, gaaska dabiiciga ah, gaaska, biyaha iyo qaar ka mid ah qalabka adag. iyo birta kale ee adag, tuubada birta waa nooc ...